ဘယ်လို RCC အလုပ်?
ဘယ်လို RentaCar Club အကျင့်ကိုကျင့်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ...
မှတ်ပုံတင်မည် & ငှား
သင်ကသင့်ရဲ့လိုင်စင်နဲ့အကောင့်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုကြလိမ့်မည်ကိုသိတော်ရှေ့မှာမှတ်ပုံတင်ခြင်း, အခမဲ့ဖြစ်ပြီးမှသာအနည်းငယ်ဘုံဘိုင်ကြာပါသည်။ သင့်အကောင့်မှအတည်ပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ရန်အသင့်လျော်သောသူအပေါင်းတို့ကားငှားရမ်းတောင်းဆိုမှုများကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ရွေးချယ်မှုကားကိုတွေ့ပြီပြီးတာနဲ့ကားပိုင်ရှင်နာရီကြာတဲ့ကိစ္စအတွင်းယာဉ်များ၏ရရှိနိုင်မှုအတည်ပြုမည်ဖြစ်သည်။
ပေးဆောင်, အတည်ပြုပါ, စုဆောင်း & ခံစားကြည့်ပါ
သင်သည်သင်၏အလိုရှိသောကားကိုငွေပေးချေမှု၏ပိုင်ရှင်ကအတည်ပြုပြီပြီးတာနဲ့သင့်ငှားရမ်းမှုဘွတ်ကင်အတည်ပြုခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။ နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်းရုံသဘောတူညီခဲ့အချိန်နှင့်တည်နေရာမှာဓာတ်ဆီတစ်ဦးအပြည့်အဝအကြံပေးအဖွဲ့နှင့်အတူသော့ဖွင့်ကောက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်နှင့်သင်၏ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုဆောင် ခဲ့. အဖြစ်ငှားရမ်းသဘောတူညီချက်များ၏မိတ္တူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပိုင်ရှင်အစည်းအဝေးအမှတ်မှာကဤစာရွက်စာတမ်းများကိုစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
ပြန်သွား & ဆန်းစစ်ခြင်း
ကားအငှားသက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သဘောတူညီခဲ့တည်နေရာနှင့်အချိန်မှဓာတ်ဆီတစ်ဦးအပြည့်အဝအကြံပေးအဖွဲ့နှင့်အတူငှားရမ်းမော်တော်ယာဉ်ပြန်လာနှစ်သက်သောရန်သင့်အားမေးပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကျောသော့ပေးပြီပြီးတာနဲ့သင့်ငှားရမ်းမှုအတွေ့အကြုံကိုအကြောင်းတရားမျှတတဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်စွန့်ခွာပါ။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါကမကျေးဇူးပြုပြီး
အခမဲ့ RentaCar Club အပေါ်သင့်ကားစာရင်းပြုစုပါ။ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းတောင်းဆိုမှုကိုအတည်ပြုသို့မဟုတ်ငြင်းပယ်။ သင်သည်သင်၏ကားကိုအခါငှားရမ်းသူကိုကျော်မောင်းနှင်မှုထိုင်ခုံအတွက်အစဉ်အမြဲများမှာ!
အတည်ပြု & အတည်ပြုပါ
ပြီးတာနဲ့တစ်ဦးငှားရမ်းသည်သင်၏မော်တော်ယာဉ်ရွေးချယ်, သင်သည်ငှားရမ်းတောင်းဆိုမှုကိုအတည်ပြု။ အဆိုပါငှားရမ်းဒီကျနော်တို့ကငှားရမ်းအတည်ပြုခဲ့သည်နှင့် paid ကြောင်းကိုသင်အတည်ပြုချက်ကိုပေးပို့ပါလိမ့်မယ်ရာအရပ်ကိုယူပြီးနောက်၎င်းတို့၏သည့်ဘွတ်ကင်များအတွက်ပေးဆောင်ဖို့တောငျးဆိုခကျြကိုစလှေတျပါလိမ့်မည်။
ထိုသို့ငှားရမ်းရဲ့အစမှာဖြစ်သကဲ့သို့သင့်ကား၏အခြေအနေတူညီကြောင်းငှားရမ်းနှင့်အတူစစ်ဆေးသေချာအောင်, အသဘောတူညီခဲ့ပြန်လာတည်နေရာမှာငှားရမ်းတွေ့ဆုံရန်။ အဆိုပါငှားရမ်းအတည်ပြုခဲ့သည်ပြီးနောက်သင်က7ရက်အတွင်းသင်ရရှိသည့်ဝင်ငွေကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။
သင် RCC အသိုင်းအဝိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိုသလား?
သင့်ရဲ့ကားစာရင်း သို့မဟုတ် တစ်ဦးကားကိုငှား
အပေါ်ကားငှားဖို့လိုအပ်ချက်ကဘာတွေလဲ RentaCar Club?
သငျသညျရပါမည် RentaCar Club မှတဆင့်ကားတစ်စီးငှားဖို့နိုင်တော့မည်ရန်:
ကအနည်းဆုံးအသက် 18 နှစ်ရှိပါ
ပြီးခဲ့သည့်5နှစ်အတွင်းတစ်ဦးထက်ပိုမတော်တဆမှုခဲ့
ဘယ်လို RentaCar Club အတည်ပြုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အလုပ်ဖြစ်တယ်သနည်း?
တစ်ဦးငှားရမ်းအတည်ပြုခဲ့သည်မီ, က RentaCar Club သေချာအောင်ဖို့ငှားရမ်း၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များနှင့်ငွေပေးချေမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးနေစဉ်တွင်, တစ်ဦးအမြန်အတည်ပြုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှတဆင့်ဝင်:
ယာဉ်မောင်းအားလုံး RentaCar Club စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီ
အဆိုပါငှားရမ်းအသက်နှင့်တွေ့ဆုံနှင့် Viriyah အာမခံပေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြည့်အဝပြီးပြည့်စုံသောအဖုံးဖွင့်ဖို့လိုအပ်သောအတွေ့အကြုံကလိုအပ်ချက်, ကားမောင်း
ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ: ငါတို့သည် run အားလုံးစစ်ဆေးမှုများပိုမိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်ဘေးကင်းကားတစ်စီးငှားရမ်း၏အတွေ့အကြုံစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့သေချာငှားရမ်းငွေကို၎င်းတို့၏အကောင့်မှတရားစွဲဆိုနှင့်လုံခြုံခရီးစဉ်သေချာမီကားတစ်စီးငှားဖို့အရည်အချင်းပြည့်မီအောင်ကအောင်မြင်ရန်။ ဒါကြောင့်အားလုံးစိတ်ငြိမ်သက်၎င်းတို့၏ကားများဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်ကို သိ. နှင့်ကောင်းမွန်သောလက်၌ရှိသည်နိုင်သူကား, နှစ်ဦးစလုံးငှားရမ်းခြင်းနှင့်ကားတစ်စီးပိုင်ရှင်များအတွက်လုံခြုံနှင့်ယုံကြည်မှုအသိုင်းအဝိုင်းတည်ဆောက်ဆက်လက်ရည်ရွယ်ချက်မှာနှငျ့အတူရှိ၏။
သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုဖြည့်: RentaCar Club မှာကျနော်တို့တူသောစိတ်ဒရိုင်ဘာနှင့်ကားပိုင်ရှင်များ၏တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းတည်ဆောက်ခြင်းအကြောင်းကိုအားလုံးပါပဲ! ကျွန်တော်တို့သည်ထိုကြောင့်, ပိုင်ရှင်တွေကိုသင်ထွက်ကသူတို့ကားကိုငှားရမ်းသက်သာခံစားရဒီတော့သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ထည့်သွင်းရန်သင်ကအကြံပြုသည်။
သင့်ရဲ့လိုင်စင်ကိုမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုရယူပါ: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ခံမှုအဖွဲ့သည်လက်ပေါ်မှာနှင့်3နှစ်အောက်နာရီအတွင်းသင့်ရဲ့လိုင်စင်ကိုအတည်ပြုရန်နိုငျသညျ, ပုံမှန်အားကမိနစ်အတွင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကားတစ်စီးကိုရှာပါ: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်မစာမျက်နှာကိုသွားပါနှင့်အကောင်းဆုံးသင်ကိုက်ညီမယ့်ကားတစ်စီးကိုရှာဖွေတည်နေရာနှင့်ရက်စွဲခြင်းဖြင့်ရှာဖွေ။ ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုစာမျက်နှာရတဲ့ပြီးနောက်, သငျသညျစျေးနှုန်းနဲ့တူသီးခြား filter များရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်နောက်ထပ်ရလဒ်များမွမ်းမံနိုင်ပါလိမ့်မည်, ဖြစ်စေလျက်, မိုင်အကွာအဝေးကန့်သတ်, အင်္ဂါရပ်များနှင့်ပိုပြီး!
ငှားရမ်းတောင်းဆိုမှုများကိုပေးပို့: သင်တဦးတည်းမော်တော်ကားကိုရှေးခယျြခဲ့ကြပြီးတာနဲ့ message ကိုသင့်ရဲ့ဘွတ်ကင်ကိုလက်မခံဖို့သူတို့ကိုတောငျးဆိုကားပိုင်ရှင်ထံသို့စလှေတျပါလိမ့်မည်။
တုံ့ပြန်မှုကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်ရှေးခယျြ: တောင်းဆိုထားသောကားကားပိုင်ရှင်တွေ pre-အတည်ပြုသို့မဟုတ်သင့်ဘွတ်ကင်တောင်းဆိုမှုကိုငြင်းပယ်ပါလိမ့်မယ်။ အဖြစ်မကြာမီသငျသညျခွင့်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိ start ကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသော Pre-approved ကားများအကြားသင်ကိုအကောင်းဆုံးကြိုက်တယ်နှင့်သင့်ဘွတ်ကင်များအတွက်ပေးဆောင်တကိုရွေးချယ်ပါ။
ငွေပေးချေမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းပါနှင့်ဘွတ်ကင်ဖြည့်စွက်: သင်သင်နှစ်သက်တဲ့ကားတစ်စီးရှေးပါပွီပြီးတာနဲ့ရိုးရှင်းစွာဘွတ်ကင်အတည်ပြုပေးဖို့ငွေပေးချေဖြည့်စွက်။ အဆိုပါဘွတ်ကင်အတည်ပြုပြီးတာနဲ့သင်ကအငှားသဘောတူညီချက်နှင့်အတူအီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
ကားကိုတက်ခူး: က (သင်သို့မဟုတ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်စေ) ထွက် print ထုတ်နှင့်မဖြစ်မနေငှားရမ်းသဘောတူညီချက်ဆောင်ခဲ့မည်သူကိုအပေါ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ထားပြီးတဲ့အခါမှာ, သင်ကဆိုပါတယ်သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့်သော့ကိုလက်ခံရရှိရန်ပိုင်ရှင်လည်းတွေ့ဆုံမည်ဖြစ်သည်။ သငျသညျကားပိုင်ရှင် check လုပ်ထားပါလိမ့်မည်မူသောသင်တို့ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်, ဆောင်ခဲ့ရမည်။
အဆိုပါငှားရမ်းပြီးနောက်: ပိုင်ရှင်နှင့်ပိုင်ရှင်၏မော်တော်ယာဉ်နှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံကိုနှင့် ပတ်သက်. ပြန်လည်သုံးသပ်ထည့်ပါ။ အဆိုပါသုံးသပ်ချက်ကိုပိုင်ရှင်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။
အပေါ်ငှားရမ်းသည့်အခါငါ့အတာဝန်များကိုဘာတွေလဲ RentaCar Club?
သင် RentaCar Club နှင့်ကားပိုင်ရှင်မှပေးအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုရည်မှတ်ရိုးရိုးသားသားဖြစ်
သင်ကတက်ခူးသည့်အခါကဲ့သို့တူညီသောလောင်စာ Level ဖြင့်, သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်သပ်ရပ်ကားကိုပြန်သွားပါ။
ကားချွတ်ရွေး-Up နှင့်တစ်စက်များအတွက်တိရှိပါ။ ဤသည်ကိုလည်းကားတစ်စီးပိုင်ရှင်တစ်ဦးတာဝန်ဖြစ်တယ်, ဒါနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်လေးစားမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်
သင်ထားပြီစာအုပ်ရိုသေစွာပြုလော့။ တစ်ဦးကမပြသ RentaCar Club မှာပြဿနာစဉ်းစားသည်နှင့်သင်တစ်ဦးအပိုဆောင်းတာဝန်ခံဆပ်ဖို့မေတ္တာရပ်ခံစေခြင်းငှါ
ကြှနျတေျာ့ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်များအတွက်တရားဝင်သည်လျှင်အဘယ်သို့ငါသိနိုငျ RentaCar Club?
လူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲကားများငှားရမ်းနိုင်သောနေရာကလုံခြုံပြီးစိတ်ချရသောအသိုင်းအဝိုင်းရှိသည်ဖို့လူတိုင်းရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်လိုင်စင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ခံမှုအဖွဲ့ကစိစစ်ရှိရမည် RentaCar Club အပေါ်တစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်ငှားရမ်းနိုင်မီ။ သင် RentaCar Club အပေါ်ကားတစ်စီးငှားဖို့အရည်အချင်းပြည့်မီခြင်းရှိမရှိသံသယအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားမောင်းသူအရည်အချင်းပြည့်မီလိုအပ်ချက်စစ်ဆေးပါ။
သင်သည်သင်၏လိုင်စင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို upload တင်ပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူအညီအဖွဲ့မှသင့်အသေးစိတျစစျဆေးနှင့်ဖြစ်စေအတည်ပြုသို့မဟုတ်ပယ်ချလိမ့်မယ်သင့်ရဲ့လိုင်စင်ကိုပယ်ချခဲ့လျှင်, ဥပမာအားရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးပုံရိပ်တစ်ခုပေးမယ့်အကြောင်းပြချက်ရှိလိမ့်မည်။
'' ချက်ချင်းဘွတ်ကင် '' ကမ်းလှမ်းကားအဝါရောင်မိုးကြိုးအတူ platform ပေါ်တွင်မှတ်သားနေကြသည်။ ဒီတံဆိပ်နှင့်အတူတစ်ဦးကကားကိုကားပိုင်ရှင်တစ်ဦးအားလုံးကြိုတင်စာရင်းသွင်း Pre-အတည်ပြုလိုက်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ငှားရမ်းသည့်အငှားတောင်းဆိုချက်ကိုအတည်ပြုပေးရန်ပိုင်ရှင်များအတွက်စောင့်ဆိုင်းရန်မလိုဘဲချက်ချင်းထိုအကားများစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုလည်းထိုသူတို့သည်အခြား RentaCar Club ငှားရမ်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်တူညီတဲ့လွှမ်းခြုံပေးစဉ်ငှားရမ်းအလျင်အမြန်ကားတစ်စီးကိုရှာဖွေကြောင်းအာမခံပါသည်။
သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်များအတွက်ရက်စွဲများကိုရွေးချယ်ပါနှင့်ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုစာမျက်နှာပေါ်တွင် '' လက်ငင်းဘွတ်ကင် '' filter ကို click လုပ်ပါ။ သင်သည်သင်၏ဘွတ်ကင်တောင်းဆိုမှုကိုလုပ်ပြီးတာနဲ့သူကအစာရှောင်အတည်ပြုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တဆင့်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါငှားရမ်းသဘောတူညီချက်ကားပိုင်ရှင်နှင့်ငှားရမ်းနှစ်ဦးစလုံးမှစလှေတျတျောကိုခံရပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါငှားရမ်းခြင်းနှင့်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆက်သွယ်ပါနှင့်ပစ်ကပ်တည်နေရာအပေါ်သဘောတူရန်တတ်နိုင်ကြသည်နိုင်အောင်ထို့အပြင်နှစ်ဖက်စလုံး၏ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက် (ဖုန်းနံပါတ်) ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
အဘယ်သူမျှမကဤငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုအားလုံးငွေပေးချေမှုအဖြစ် RentaCar Club အပေါ်မရရှိနိုင်ဒီကားကိုပိုင်ရှင်တွေကလုံခြုံရေးအဘို့ဖြစ်၏ (ဒက်ဘစ်ကဒ်သို့မဟုတ်ငွေသားခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်) တစ်ခုသာခရက်ဒစ်ကဒ်ကို အသုံးပြု. အွန်လိုင်းလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းအွန်လိုင်းပေါ်ငွေပေးချေရာတွင်လည်းကားအငှားကာလအတွင်းအပြည့်အဝအာမခံထားကြောင်းကိုသေချာ။ ဒီမရှိရင်, သင့်ဘွတ်ကင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းမှတဆင့်အမှုကိုပြုခံရခြင်းအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်ကားကို RentaCar Club အားဖြင့်အာမခံထားခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
၎င်းတို့၏ခရီးစဉ်ကြာချိန်စဉ်အတွင်းငှားရမ်းဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည့်စုံအာမခံမူဝါဒ, ဘတ်ငွေ 259 ဇိမ်ခံကားများအတွက် 603 ဘတ်တစ်ရက်မှသေးငယ်တဲ့ကားတွေတစ် နေ့မှစ. ကွဲပြားခြားနားသည်။
မတော်တဆမှုများဖြစ်ရပ်အတွက်ဒါမှမဟုတ်ကားငှားရမ်းကာလအတွင်းပျက်စီးနေသည်လျှင်, ငှားရမ်းအာမခံပိုလျှံ 3000 ဘတ်ပေးဆောင်ဖို့တောင်းပါလိမ့်မည်။
ငါဘယ်လိုအပျေါမှာငါ့ကားကိုစာရင်းပြုစုကြဘူး RentaCar Club?
သင့်ရဲ့မော်တော်ယာဉ်စာရင်းပြုစုရန်, သင့်ကားခိုင်လုံသောနှစ်ပတ်လည်အာမခံပေါ်လစီသည်တို့ပါဝင်သည်ငါတို့အရည်အချင်းပြည့်မီလိုအပ်ချက်, သင်၏မော်တော်ယာဉ်များအတွက်အခွန်များပေးဆောင်တွေ့ဆုံရန်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အာမခံထားခံရဖို့ Viriyah နေဖြင့်ခွင့်ပြုအသက်အကြီးဆုံးကားကိုအသက် 10 နှစ်အရွယ်ကြောင်းသတိပြုပါ။
သင်သည်မည်သည့်အကွံဉာဏျလိုအပ်တယ်ဆိုရင် support@rentacarclub.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
သင့်ကားရဲ့နှစ်ဖြစ်စေလျက်, မော်ဒယ် number ကိုပန်းကန်နှင့်မိုင်အကွာအဝေး။
ယာဉ်ရှိပြီးမဆိုအထူး features တွေထွက်ညွှန်ပြယာဉ်များ၏ဖော်ပြချက်။
အဘယ်ကြောင့်ငါနဲ့ငါ့ကားကထွက်ကိုငှားရမ်းသင့်တယ် RentaCar Club?
RentaCar Club ကားတစ်စီးပိုင်ရှင်တွေအဲဒီလိုအာမခံအဖြစ်ပြဿနာများကိုကိုင်တွယ်စဉ်ကအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့အဆင်ပြေ၎င်းတို့၏မော်တော်ယာဉ်နှင့်အတူငွေရှာနိုင်ကြသည်မထွက်ရတဲ့ပလက်ဖောင်းပေးပါသည်။
RentaCar Club ကားတစ်စီးပိုင်ရှင်များအတွက်အများကြီးကြီးမြတ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုကမ်းလှမ်း:
ဒါကြောင့် join ဖို့လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်လိုချင်သောအဖြစ်များအတွက်စာရင်းသင့်ကားထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
ရှိတယ်မရှိဘူးနိမ့်ဆုံးကတိကဝတ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သငျသညျကိုသူတို့ငှားခြင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့အဘို့အရှည်လျားနိုငျသောအခါ, သင့်ကားငှားနိုင်သူကိုရွေးချယ်ပါ။
RentaCar Club အပေါ်မှာငါ့ကားကိုစာရင်းပြုစုဖို့လိုအပ်ချက်ကဘာတွေလဲ?
သင်သည်ပိုင်ရှင်နှင့်ကားတစ်စီး၏မှတ်ပုံတင်ထားသောဂိုးသမားဖြစ်ရမည် RentaCar Club နှင့်သင်၏ကားကိုစာရင်းပြုစုရန်။
ကားမောင်းသူရဲ့ထိုင်ခုံအပါအဝင်ထက်ပို7ထိုင်ခုံမရှိဘူးလား
အထူးဂရုပြုရန်: ကားများ၏ပိုင်ရှင်ဖော်ပြထားလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းမပါဘူးဆိုရင်, ကားအငှားကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ Viriyah ပြည့်စုံအာမခံမူဝါဒနှင့်မဆိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာဝန်အားဖြင့်အာမခံထားမည်မဟုတ်ပါယာဉ်၏ပိုင်ရှင်အပေါ်အားကိုးလိမ့်မယ်။
သငျသညျ drivers တွေကိုဘယ်လိုမျက်နှာပြင်သလဲ?
RentaCar Club ကတဆင့်ကားများငှားဖို့လိုလားကြောင်းလူတိုင်းအောက်ပါအချက်အလက်တွေကိုပေးရပါမယ်:
လွန်ခဲ့သော5နှစ်မျှအရှိန်သို့မဟုတ်အရက်သောက်ယုံကြည်မှုများရှိသည်။
လွန်ခဲ့သော3နှစ်ထဲ၌နောက်တဖန်မ2ထက်မတော်တဆမှုရှိခဲ့တယ်။
အပြည့်အဝအမည်, မြင်နိုင်သောပရိုဖိုင်းပုံတစ်ပုံ, တယ်လီဖုန်းနှင့်လိပ်စာ။
အားလုံးငွေပေးချေမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်ဟာတိကျမှန်ကန်သောငွေပမာဏကိုအားသွင်းရန်အဘို့အအလို့ငှာ (သာခရက်ဒစ်သုံးပြီး) အွန်လိုင်းလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်အဖြစ်အဘယ်သူမျှမက, ဤ option ကို RentaCar Club အပေါ်မရရှိနိုင်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းအွန်လိုင်းပေါ်ငွေပေးချေမှုရမည့်နည်းလမ်းလည်းကားအငှားကာလအတွင်းအပြည့်အဝအာမခံထားကြောင်းကိုသေချာ။ ဒီမရှိရင်, သင့်ဘွတ်ကင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းမှတဆင့်အမှုကိုပြုခံရခြင်းအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်ကားကို RentaCar Club နေဖြင့်အာမခံထားလိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးနှင့်တစ်ဦးပျက်ပြားသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏အမှု၌, RentaCar Club လွှမ်းခြုံနှင့်အကူအညီများမပေးနိုငျသညျ, မကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းဘေးကူညီစောင့်ရှောက်ရေးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုတည်းသောခရက်ဒစ်ကဒ်ဖို့ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကန့်သတ်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမူဝါဒများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ငှားရမ်းသူတို့ရဲ့ကဒ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာအဲဒါကိုလိုအပ်သောရဲ့အမှု၌ငှားရမ်းဖျက်သိမ်းခြင်းအခကြေးငွေ, လောင်စာနှင့်သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်ခနှင့်အာမခံပိုလျှံအားသွင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျအခမဲ့ RentaCar Club ပေါ်တွင်သင်၏ကားကိုစာရင်းပြုစုနိုင်ပါတယ်။ RentaCar Club ရိုးရှင်းစွာ "ကားပိုင်ရှင်ဝန်ဆောင်မှု" ကြေးအဖြစ်လူသိများသော (ပို့ဆောင်မှုစရိတ်ဖယ်ထုတ်ပြီး) တစ်ဦးငှားရမ်း၏စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်၏ 20% ကော်မရှင်, ကြာပါသည်။ မော်တော်ကားပိုင်ရှင်များ, စုစုပေါင်း၏ 80% ကိုဝေစု၏ကျန်လက်ခံရရှိသည်။
ဤသည်အခကြေးငွေကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုန်ကျစရိတ်, မော်တော်ကားအာမခံကမ်းလှမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းဘွတ်ကင်ပလက်ဖောင်း running ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုဖုံးလွှမ်းခြင်း, ဝန်ထမ်းများထောက်ခံပါတယ်ကူညီပေးသည်။
အဆိုပါငှားရမ်းအဆုံးသတ်ထားပါတယ်တစ်ချိန်ကင်ငွေကိုကားပိုင်ရှင်၏ account ကိုပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်။
600 ဘတ် / နေ့မှာစာရင်းဝင်ယာဉ်နှင့်အတူ 2-နေ့ကငှားရမ်း
စုစုပေါင်းငှားရမ်းစျေးနှုန်း: X ကို 6002ဘတ်ငွေ = 1200 ဘတ်
မော်တော်ကားပိုင်ရှင်ဝန်ဆောင်မှုအခကြေးငွေ = 240 ဘတ်
= 960 ဘတ်စုစုပေါင်းဝင်ငွေရရှိမှု
RentaCar Club ကြောင့်စာရင်းသွင်းခံရဖို့အပေါငျးတို့သလိုအပ်ချက်များကို fullfils လျှင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူငှားရမ်းထားသောသောကာလအတွင်းသင့်ရဲ့မော်တော်ယာဉ်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်တိကျတဲ့အာမခံမူဝါဒအရယူပေးခဲ့သည်။ ဤသည်အာမခံအဖုံး (သင်တရားဝင်မဆိုအမှု၌ရှိရမည်) ကိုတည်ဆဲကားတစ်စီးအာမခံ, သော့ချက်ဖလှယ်မှုများ၏ယခုအချိန်တွင်အပေါ်သက်ဝင်နှင့်ငှားရမ်းကာလအဘို့အသင့်ကားအာမခံအစားထိုး်ယူ။
အဆိုပါငှားရမ်းနေစဉ်အတွင်းမည်သည့်တောင်းဆိုမှုများကျွန်တော်တို့ရဲ့မူဝါဒကဆန့်ကျင်နေကြသည် - သင်သည်သင်၏ကားကို RentaCar Club နှင့်အတူငှားရမ်းသည့်အခါကံဆိုးတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့၏အာမခံမူဝါဒအထိခိုက်မဖြစ်သင့်ယုံကြည်ပါတယ်။
အဲဒါကိုငှားနေစဉ် Viriyah ရဲ့သီးခြားအာမခံပေါ်လစီသည်နှင့်သင်၏ကားကိုဖုံးအုပ်၏ကုန်ကျစရိတ်ထားပြီးအငှားစျေးနှုန်းများတွင်ပါဝင်သည်။